एक मौन विद्रोह
२०७४ फागुन २६ शनिबार ०८:३४:००
– कुमार शर्मा
तपाईं एउटा फिल्म हेर्नुहुन्छ । पहिलोचोटि हेर्दा तपाईंलाई फिल्म मन पर्छ । केही दिन त्यही फिल्म र त्यसका पात्रहरूलाई सम्झिनुहुन्छ । दिन बित्दै जान्छन् । बितेको समयसँगै उक्त फिल्मको सम्झना पनि धमिलो हुँदै जान्छ अनि क्रमश: मानसपटलबाट हराउँदै जान्छ । वर्ष बित्छन् । एक दिन अनायासै त्यस फिल्मको याद आउँछ । इन्टरनेटमा सजिलै भेटिन्छ, तपाईंको खुशीले सीमा नाघ्छ । पहिलोचोटि हेर्दाको भन्दा बढी उत्साहका साथ फिल्म हेर्नुहुन्छ । तर, यसपटक हेरिसकेपछि उक्त फिल्म तपाईंले बिर्सनुहुन्न । अझ भनौं- बिर्सन सक्नु हुन्न । त्यो फिल्म तपाईंको अन्तरमनमा गडिरहन्छ । पात्रहरूसँग तपाईंको संवाद निरन्तर चलिरहन्छ । कालान्तरमा त्यही फिल्म तपाईंको निरन्तर प्रेरणाको स्रोत भइदिन्छ । फिल्म केवल फिल्ममात्र नभएर एउटा अभिन्न अंगजस्तो भइदिन्छ ।
तपाईंसँग उक्त फिल्म मन पर्ने हजार कारण छन् र पनि तपाईं कुनै एउटै कारण किटान गरेर यही हो भन्न सक्नु हुन्न । आफूलाई असाध्यै मन परेको मान्छेको कुनै एउटा गुण ठ्याक्कै भन्न असमर्थ भए जस्तो ।
सामान्यतया कुनै पनि व्यावसायिक फिल्मको प्राथमिक उद्देश्य भनेको आर्थिक लाभ हासिल गर्नु नै हुन्छ । त्यसमा कसैको पनि दुईमत नहोला । तर, के एउटा व्यावसायिक फिल्मको उद्देश्य त्यतिसम्म मात्र सीमित हुन्छ ? या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ ?
फिल्म निर्माणकर्ताहरुको प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ भएजस्तै आम दर्शकहरुको कुनै एउटा फिल्मबाट हुने पहिलो अपेक्षा शायद मनोरञ्जन नै हुन्छ । तर, के दर्शकहरुको अपेक्षा मनोरञ्जनसम्म मात्रै सीमित हुन्छ ? या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ ?
अब अलिकति पृष्ठभूमिको कुरा गरौँ ।
बलिउडका एक निर्देशकले एउटा कथा लेख्छन् । उनी त्यसमा फिल्म बनाउन चाहन्छन् । उनलाई अहिले सहनिर्देशक मात्र भनौं किनभने उनले आफैंले फिल्म बनाइसकेका छैनन् । अरु निर्देशकलाई थुप्रै फिल्ममा मद्दत गरेका छन्, सहनिर्देशकको रूपमा । त्यो कथा उनले एक निर्माता/निर्देशकलाई देखाउँछन् ।
ती निर्माता/निर्देशक उनको कथा (स्क्रिप्ट) पढेर चकित पर्छन्- किनकी उनलाई लाग्छ त्यो कथा त स्वयम् उ आफैसंग पो मिल्छ । ति निर्माता/निर्देशकलाई लाग्छ- यो कथा त मैले पो लेख्नु पर्थ्यो ! आफ्नो मनोभाव अरु कसैले बताइदिए जस्तो लाग्छ उनलाई । आफ्नो मनपर्ने गीत अरु कसैले गुन्गुनाइदिए जस्तो !
अन्तत: दुईबीच कुरा मिल्छ । ती निर्माता/निर्देशकको लगानीमा तिनै सहनिर्देशकले फिल्म बनाउने हुन्छन् । उनले बनाउने पहिलो फिल्म । फिल्मको सुटिङ ४२ दिनमै सकिन्छ । हलिउड निर्देशक क्लिन्ट इस्टउडले 'मिलियन डलर बेबी'को सुटिंग ३७ दिनमा सकेजस्तै । सो फार, सो गुड !
त्यो वर्षको 'कान्स फिल्म महोत्सव'मा उक्त फिल्म छनोट हुन्छ । विदेशतिरबाट राम्रो 'रेस्पोन्स' पनि आउँछ । लगत्तै भारतमा पनि रिलिज हुन्छ । सुरुवाती दिनतिर बक्स अफिसमा फिल्म सफल मानिँदैन । तर, जसै समय बित्दै जान्छ, उक्त फिल्मलाई भारतीय सिनेमाको 'कल्ट क्लासिक'को रूपमा लिन थालिन्छ । ती सहनिर्देशकको गणना अब्बल दर्जाका निर्देशकहरुसित हुन्छ । अनि बाँकी सबै इतिहास ।
फिल्म सन् २०१० मा रिलिज भए पनि मैले हेर्ने अवसर भने तीन वर्षपछि सन् २०१३ मा मात्र पाएँ । त्यो बेला फिल्म रिलिज भएको थाहै भएन । यो फिल्म नै त्यस्तै थियो । सानो बजेटको, नव निर्देशकको फिल्म । कतिखेर आयो, कतिखेर गयो- थाहै नहुने । नेपालका फिल्म हलहरुमा यस्ता प्रकृतिका फिल्महरुको मुख पनि देख्न पाइँदैन । 'दबंग' अनि 'चेन्नई एक्सप्रेस'हरुको चपेटामा कैयौं निम्छराहरुको उडान भारतमै हुन पाउँदैन !
बाबु-छोराको सम्बन्धको कथा फिल्मले केलाउन खोज्नु कुनै नयाँ कुरा भने थिएन । चाहे त्यो भारतीय फिल्ममेकर रमेश सिप्पी (जो 'शोले'का लागि प्रसिद्ध छन्) को सन् १९८२ को फिल्म 'शक्ति' होस् या आइरिस निर्देशक जिम सेरिडनको 'इन द नेम अफ द फादर' होस्– बाबु-छोराबीचको अक्सर अप्ठ्यारो सम्बन्धको कथा हामीले ठूलो पर्दामा हेर्दै आएका हौँ । कथावस्तु उस्तै भए पनि मैले अहिले उल्लेख गरिरहेको फिल्म भने अलि बेग्लै तप्काको थियो । 'मेड फ्रम अ डिफरेन्ट मटेरियल' भने जस्तो !
एक आक्रामक, तानाशाही अनि हिंसाप्रेमी बाबु, जसको जिन्दगी यति तिक्तताले भरिएको छ कि ऊ फिल्म अवधिभरि हाँसेको नै देखिदैन र उसको १७ वर्षीय 'टिन एज' छोराबीचको एउटा असजिलो अनि अप्ठ्यारो सम्बन्धको कथा । सिम्लाको एउटा हाईस्कुलबाट १७ वर्षको रोहन निष्कासित हुन्छ, जब होस्टेलको वार्डेनले ऊलगायत उसका साथीहरुलाई क्याम्पसबाहिर वयश्क फिल्म हेर्दै गर्दा रंगेहात पक्रिन्छन् । रोहन जम्शेदपुर फर्किंदा घरमा उसको बाबुमात्र हुँदैन । ६ वर्षको अर्को बच्चा पनि हुन्छ । उसको भाइ । नयाँ भाइ । अझ भनौं- आधा भाई, जसको बारेमा उसलाई थाहा पनि हुँदैन । वा, भनौं थाहा दिन आवश्यक ठानिएको हुँदैन । अनि सुरु हुन्छ एउटा संघर्षको कथा । एउटा मौन विद्रोहको कथा ।
भनिन्छ नि- मान्छेका ओंठले भन्दा बढी उसका आँखाले अभिव्यक्त गर्छन् । रोहनलाई हेर्दा त्यस्तै लाग्छ । उसको अभिनयभन्दा पनि बढी म उसका आँखा नियाल्छु । उसको शरीरको हाउभाउ अनि उसको मुखबाट निस्किने संवादभन्दा बढी उसका आँखा बोल्छन् । आफ्नो पिताको अगाडि रोहनको आँखामा रिस, क्रोध अनि डर एकैपटक झल्किन्छ । जब ऊ आफ्नो भाइसँग हुन्छ, ती आँखामा ममता अनि स्नेह देखिन्छ । आफ्नो साथीलाई कविता सुनाइरहँदा उसका आँखाले सपनाको कुरा गर्छन् । ती नयनमा एउटा आशाको दियो बल्छ । फिल्मको अन्त्यमा आफ्नो भाइको हात समाउँदै जब ऊ घरबाट निस्किन्छ, उसका दुई आँखाले राहतको सास फेर्छन् । वर्तमानको धरातलमा उभिए पनि उसका दुई आँखामा भविष्य झल्किन्छ ।
यो फिल्मको कथा रोहनबाट सुरु हुन्छ र उसैबाट अन्त्य हुन्छ । उसको संघर्ष अनि सपनाकोवरिपरि कथा बुनिएको छ । तर, अभिनयको हिसाबले खलपात्र भएर पनि असली नायक भने रोहनका पिता हुन्, जसको भूमिकामा छन् रोनित रोय । बलिउडमा खासै नाम नसुने पनि रोनित भारतीय टेलिभिजनमा एउटा स्थापित नाम हो ।
एक तानाशाही एवं रिसाहा पिताको भूमिकामा रोनित यसरी जमेका छन्, जसरी पानीले वस्तुअनुसारको आकार लिन्छ । रोहन यो फिल्मको मुटु हो भने रोनितले निर्वाह गरेको पात्र भैरवसिंह फिल्मको धड्कन हो ।
कहिलेकाहीँ यसै सोच्छु- किन यो फिल्मले मलाई यति धेरै प्रभाव पाऱ्यो ?
आफैसँग प्रश्न गर्छु- किन यो फिल्मसँग यति धेरै 'रिलेट' गर्न सकें ?
शायद यस्ता प्रश्नको कुनै एउटा निश्चित 'सही' उत्तर हुँदैन । फिल्मको कथा र पात्रहरुको अभिनयलाई एकछिन छेउमा राख्ने हो भने मसँग माथिका दुई प्रश्नको शायद उत्तर पनि छैन । र, पनि यो फिल्मको बारेमा पट्यार नमानी घन्टौं कुरा गर्न भने सक्छु । यस्तो लाग्छ कि यो फिल्मसँग मेरो विशेष लगाव छ, खासगरी रोहनसँग । यस्तो लाग्छ- म उसलाई वर्षौंदेखि चिन्छु, उसको हरेक हाँसो अनि आँशुसँग, उसका हरेक सपनासँग परिचित छु । उसको हरेक पाइला-पाइलामा मेरा नजर छन् । सन् २०११ को 'शैतान' नाम गरेको फिल्ममा छोटो भूमिकामा बाहेक रोहन यानिकी रजत बर्मेचा ठूलो पर्दामा देखिएका छैनन् । सुनिँदैछ- निर्देशक इम्तियाज अलीले यिनै रजतलाई आफ्नो नयाँ फिल्ममा 'कास्ट' गर्दैछन् । फिल्म यसै वर्ष रिलिज हुने सम्भावना छ । उनका आँखा पढ्न मेरा नयन सधैं पर्खिरहेका हुनेछन् ।
फिल्म रिलिज भएको करिब ९ वर्ष भइसकेको छ, मैले हेरेको नै लगभग ६ वर्ष । योबीचमा कुनै एकदिन पनि त्यस्तो छैन, जुन दिन मैले यो फिल्मको बारेमा नसोचेको हुँ । युट्युबमा गएर यसका गीत टाइप नगरेको हुँ । यो फिल्मका गीत मात्रै सुन्दा पनि फिल्मको तस्बिर सामुन्ने आउँछ । फिल्मको कथालाई गीतले 'कम्प्लिमेन्ट' गरेको योभन्दा सुन्दर उदाहरण शायद अर्को नहोला । अनुहारमा अलिअलि डर अनि अलिअलि आशा लिएर कुनै १६-१७ वर्षको किशोर ठिटो झोला बोकेर बाटोमा कतै हिंडेको देखियो भने रोहनलाई सम्झिन्छु । यतिका वर्षका बाबजुद यो फिल्मसँगको मेरो 'लभ अफेयर' अझै पनि जारी छ । पूरा दुनियासँग लुकाएर राखिएको कुनै गोप्य सम्बन्ध जस्तो, एउटा 'सिक्रेट लभर' जस्तो ।
यो फिल्मको बारेमा धेरै बोलिसकें, शायद अहिलेसम्म तपाईंहरुले कुन फिल्म हो भनेर पत्ता लगाइसक्नुभयो होला । नाम बताइरहनु आवश्यक छैन । यदि पत्ता लगाउनुभएको छैन भने अलिकति इन्टरनेटमा रिसर्च गर्नुहोस् । यति ढुक्कका भन्न सक्छु कि तपाईंको रिसर्च खेर जाने छैन ।
जाँदाजाँदै यति भन्न चाहन्छु कि ती सहनिर्देशक विक्रमादित्य मोटवाने थिए भने ती निर्माता/निर्देशक थिए- अनुराग कश्यप ।
कुनै-कुनै सिनेमाको हकमा फिल्मको अन्त्यमा पर्दामा लेखिएको ‘द एन्ड’ सँगै फिल्म समाप्त हुँदो रहेनछ । यसै फिल्मको एउटा गीतले भनेजस्तै:
कहानी खत्म है, या सुरुवात होने को है
आने वाला वक्त देगा पनाहें
या फिरसे मिलेंगे दो राहें
खबर क्या, क्या पता...